nigeria ရှိငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်ကြက်အစာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ,ငါးမွေးမြူရေးအစာနှင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအပြင်ငါးအစာအမျိုးမျိုးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ငါးအစာကျွေးခြင်းစက်ကိုအသုံးပြုသည်။,အာဟာရဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်, ပရိုတိန်းအချိုးတိုး
နိုင်ဂျီးရီးယား၏ရေပေါ်ငါးအစာကျွေးထုတ်လုပ်မှုစက်ကြက်အစာကျွေးနိုင်ပါတယ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ, ရေနေအစာနှင့်ငါးအစာကျွေး. ငါးအစာကျွေးသည့်စက်သည်ငါးအစာကျွေးခြင်းများကိုလျှော့ချရန်အတွက်ငါးအစာအမျိုးမျိုးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်. အာဟာရ, ပရိုတိန်းအချိုးတိုးတက်စေ.
1. နောက်ဆုံးအစာတောင့်သည်ထူးခြားသောပုံစံရှိသည်, အရသာကောင်း, မြင့်မားသောအာဟာရနှင့်ဒဏ်ငွေ texture
2. ငါးနှင့်ပုစွန်အစာကျွေးခြင်းအတွက်, အတောင့်ကို extruding သောအခါရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေပေါ်အချိန်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်.
3. နိုင်ဂျီယာတွင်ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည် (ငါးခူ, တီလားပီးယား, ပုစွန်, စသည်တို့) ကိုင်ဆောင်သူသို့မဟုတ်ငါးအစာကျွေးအပြောင်းအလဲနဲ့အပင်.
4. The ခြောက်သွေ့သောငါးအစာကျွေးခြင်း extruder အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးမွေးမြူရေးခြံများသို့မဟုတ်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်အပင်များအတွက်သင့်တော်သည်.
5. ငါးအစာဝယ်ယူခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငါးအစာတောင့်များကိုငါးအစာကြေထုတ်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အကျိုးရှိသည်.
7. နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်: ခြောက်သွေ့သောငါးအစာကျွေးသော extruder နှင့်စိုစွတ်သောငါးအစာကျွေး၏ extruder.
နိုင်ဂျီးရီးယားသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိငါးအများဆုံးစားသုံးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ငါး ၀ ယ်လိုအားဆက်လက်တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ, လယ်သမားများစွာသည်၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အသေးစားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ကြသည်, အမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိရန်အတွက်အကြီးစားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ပါ. နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်စီးပွားဖြစ်ငါးမွေးမြူရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်. ငါးမွေးမြူရေးတွင်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်မှာငါးအစာဖြစ်သည်, ၎င်းသည်ငါးများအားအစာကြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးနိုင်သည်. ငါးအစာထုတ်လုပ်ရန်, နိုင်ဂျီးရီးယားရှိငါးအစာစက်များစွာကိုငါးမွေးမြူရေးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်. သိသာထင်ရှားတယ်, ငါးအစာထုတ်စက်သည်ငါးအစာထုတ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိပြီးငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်. နိုင်ဂျီးရီးယားသည်အာဖရိကငါးခူ၏အဓိကထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်အတူ 85000 တစ်နှစ်လျှင်မက်ထရစ်တန်ချိန်. သို့သော်ယင်းသည်လူတစ် ဦး ချင်း၏ပရိုတိန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ဝေးသည်. ၎င်းကိုဥရောပမှတင်သွင်းမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်, တောင်အမေရိကနှင့် Far East. စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, နိုင်ဂျီးရီးယား၏ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်ရန်အလားအလာရှိသောကြောင့်ဤသည်မလိုအပ်ပါ5တန်ချိန်သန်းပေါင်းများစွာ, သောအာဖရိက၏တပြင်လုံးကိုအစေခံနိုင်ပါတယ်.